ခြစ်ရာကနေစိုထိုင်းသောနှင့် fluffy Vanilla မယားစကား - မင်္ဂလာပါ
ငါဒါသင်တစ် ဦး မယားစကားဖြစ်ချင်တယ်အရာအားလုံးရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောစိုစွတ်သောနှင့် fluffy vanilla မယားစကားနည်းသည်ထင်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ကိုက်ထဲမှာအရသာအများကြီး။ အဆိုပါနို့ထွက်ကောင်းတဲ့ tang ကထပ်ပြောသည်နှင့်မယားစကားစိုစွတ်သော, ငါမပါဘဲစုံတွဲတစ်တွဲကိုစားကြပေမည် နှင်းခဲ ! မင်းကြိုက်ရင် အဖြူကတ္တီပါ buttermilk ကိတ်မုန့် သို့မဟုတ်ငါ့ vanilla ကိတ်မုန့် မင်းကဒီကိတ်မုန့်ကိုချစ်လိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်စွယ်စုံင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအလေးအနက်ထားဒီ vanilla မယားစကားစာရွက် LOVE LOVE LOVE! သင်ကပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ် စတော်ဘယ်ရီ buttercream စတော်ဘယ်ရီ Shortcake မယားစကားစေရန်။ သငျသညျအခြို့သော yummy နှင့်အတူသူတို့ကိုနှင်းခဲနိုင်ပါတယ် ချောကလက် ganache ဒါမှမဟုတ် ချောကလက် buttercream အသီးသည်သင်၏အရာမဟုတ်ပါဘူးလျှင်။ သံပုရာချစ်သူများအတွက်, သင်၏မယားစကားအချို့နှင့်ဖြည့်ကြိုးစားပါ သံပုရာထောပတ် ပိုက်အိတ်နှင့်လတ်ဆတ်နှင့်အတူ topping ၌တည်၏ တည်ငြိမ်ကြာပွတ်မုန့် !
သငျသညျ Battery ကိုမှနံ့သာမျိုးကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သူတို့ကိုမွှေးကြိုင်သောကိတ်မုန့်သို့ဖြစ်စေခြင်းငှါသို့မဟုတ်သင်အနည်းငယ်သံပုရာ zest နှင့် blueberries အနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ဤသည်အလေးအနက်ထားအများဆုံးစွယ်စုံမယားစကား။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်! သငျသညျပင်ဖြန်းအတွက်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သူတို့ကို funfetti မယားစကားစေနိုင်သည်!
ဒီ vanilla cupcake စာရွက်မှာရှိတဲ့အဆီဟာမင်ကိတ်မုန့်အလွန်စိုစွတ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်။ နို့ထွက်ပစ္စည်းသည်အက်စစ်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ပိုမိုနူးညံ့သောမက္ကကိတ်မုန့်အတွက်ဂျုံမှုန့်မှ gluten ကိုဖြိုခွဲနိုင်သည်။
Protip - ဒီစာရွက်မှာရှိတဲ့ဆီနည်းနည်းကမက္ကဆီကန်ကိုစိုစွတ်အောင်ကူညီပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်စာရွက်ထဲမှာပါတဲ့ဆီများလွန်းတာကြောင့်ထုပ်ကကိတ်ကိတ်နဲ့ဝေးသွားအောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်မှာစာရွက်တွင်အရည်များလွန်းခြင်းမှဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
Moist Vanilla မယားစကားများတစ်ဆင့်ချင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ဒီ vanilla cupcake စာရွက်အောင်လုပ်ရတာဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ်ဆိုတာပြတဲ့ငါ့သမီး Avalon ရဲ့အောက်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အခန်းအပူချိန်သို့မဟုတ်နွေးထွေးသောဘက်၌အနည်းငယ်မျှသာရှိကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ငါ့နို့ကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာစက္ကန့် ၃၀ လောက်နွေးလိုက်တယ်။ ထောပတ်သည်သင်နှိပ်သောအခါဖိအားတစ်ခုဖြင့်နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသင့်သည်၊ သို့သော်၎င်း၏ပုံသဏ္holdingာန်ကိုကိုင်ထားဆဲဖြစ်သည်။ သင်၏ဥများကိုပူနွေးစေရန်မိနစ် ၅၀ ခန့်ရေပူထဲသို့ထည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုတိုင်းတာရန်အတိုင်းအတာကို အသုံးပြု၍ စာရွက်သည်အချိန်တိုင်းပြီးပြည့်စုံစွာရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ချက်ပြုတ်နည်းများအတွက်မီးဖိုချောင်စကေးကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုရသည်ကိုပိုမိုလေ့လာပါ blog post ။
အဆင့် 1 - သင့်မီးဖိုအား350ºFအထိအပူပေးပြီးစက္ကူမွန်းတည့်ကော်ကရီများဖြင့်မွှေးပုလင်းနှစ်ခုကိုတန်းစီပါ။ သင်၌ရှိရှိသမျှသင်သည်တစ်ချိန်ကဒယ်အိုးတစ်လုံးကိုဖုတ်နိုင်သည်။
အဆင့် ၂ - သင့် vanilla ကိုနို့ထဲသို့ထည့်ပြီးဘေးဖယ်ထားပါ။
အဆင့်3- ဥများကိုရေနံနှင့်ပေါင်းစပ်။ ကြက်ဥများပြိုကွဲစေရန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသုတ်လိမ်းပေးပါ။ သူတို့ကိုဖယ်ထားပါ။
Protip - ထို“ ဂန္တဝင်ကုန်စုံဆိုင်ကိတ်မုန့်” အရသာအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း vanilla extract ကိုသုံးပါ။ အစစ်အမှန် vanilla extract ကို အသုံးပြု၍ vanilla အရသာ (သို့) vanilla bean ကိုသုံးပါ။ တစ်ခုမှာ vanilla bean =2Tsp vanilla ထုတ်ယူ။
အဆင့်4- မုန့်ညက်၊ သကြား၊ မုန့်ဖုတ်အမှုန့်၊ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါနှင့်ဆားတို့ကိုသင်၏ရပ်တည်သည့်အရောအနှောရောနှောထားသောအိုးတွင်ပူးတွဲပါသောလှော်နှင့်တွဲဖက်ပါ။
အဆင့်5- သင်၏ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်ထဲသို့ထည့်ပြီးမုန့်ညက်အရောအနှောသည်သဲဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မတူသည်အထိရောနှောပါ။ သင်၏ထောပတ်မည်မျှပျော့ပျောင်းမှုပေါ် မူတည်၍ တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်မိနစ်ခန့်ကြာနိုင်သည်။
အဆင့်6- နို့အရောအနှောထည့်ပြီးအလယ်အလတ်သို့အရှိန်မြှင့်ပါ။ (KitchenAid တွင်အမြန်နှုန်း ၄၊ bosch ရှိအရှိန် ၂) ။ အဆိုပါမယားစကား၏ fluffy ဖွဲ့စည်းပုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ 1 1/2 မိနစ်ရောမွှေပါ။ အဆိုပါ Battery ကိုအဝါရောင်ဖြစ်ခြင်းကနေ fluffy အဖြူမှသွားပါလိမ့်မယ်။ သင်၌ရှိသည့်အရာမှန်လျှင်သင်ဤခြေလှမ်းအတွက်လက်ရောကိုသုံးနိုင်သည်။
အဆင့် ၇ - အနိမ့်အမြင့်တွင်ရောနှောနေစဉ်သင်၏ကြက်ဥအရောအနှော၏ ၁/၃ ကိုထည့်ပါ။ ကျန်သောအရောအနှော၏ပေါင်းတစ်ဝက်တွင်ပေါင်းထည့်ပါ၊ ပြီးလျှင်အပြည့်အဝရောစပ်ပါ၊ ကျန်ထည့်ပါ။ ရုံပေါင်းစပ်သည်အထိရောမွှေပါ။
အဆင့် ၈ - အကောင်းဆုံးမြင့်တက်မှုအတွက်သင်၏မက္ကဆီကိုနံပါတ် ၂/၃ ကိုဖြည့်ပါ။ ငါသည်ငါ့ Battery ကိုတိုင်းတာရန်ငါ့မီးဖိုချောင်စကေးကိုအသုံးပြုပါ။ ၁.၅ အောင်စကိတ်မုန့်တစ်လီတာအတွက်ဘက်ထရီသည်ကျွန်ုပ်၏မီးဖိုနှင့်အမြင့်တွင်ပြည့်စုံပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အခြားမီးဖိုများတွင်ရလဒ်များကိုရောနှောပြီးပါပြီ။ ထို့ကြောင့်သင့်အတွက်မည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကိုရှာဖွေပြီး၎င်းနှင့်ကပ်ပါ။ မြင့်မားတဲ့အမြင့်မှာမုန့်ဖုတ်? ငါ့အထဲကစစ်ဆေးပါ အမြင့်မုန့်ဖုတ် hacks ။
အဆင့်9- သင်၏မုတ်ဆိတ်ကို ၁၅-၁၆ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ရမည်။ သို့မဟုတ်သူတို့သည်ရွှေရောင်အညိုရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲလာပြီးသင်၏လက်ချောင်းဖြင့်ပေါ့ပါးစွာထိမိသည့်အခါမွန်းတည့်ချိန်သည်ပြန်ပေါက်လာသည်။ ငါမုန့်ညက်တောင်မှအဘို့အဖုတ်မှတဆင့်ငါ့မယားစကားတစ်ဝက်လှည့်။
မုန့်ဒိန်ခဲ icing နှင့်အတူ applesauce အမွှေးအကြိုင်ကိတ်မုန့်
အဆင့် 10 - သင်၏မက္ကဆီကိုငါးမိနစ်ခန့်အေးအောင်ထားပါ။ ထို့နောက်၎င်းတို့ကိုအေးခဲစေပြီးအအေးခံရန်အအေးခံစင်သို့ပြောင်းပါ။ ငါသည်ငါ့လွယ်ကူသော buttercream နှင်းခဲကိုအသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်သော်လည်းသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနှင်းခဲကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ငါပိုက်အိတ်နှင့် 15mm ကြယ်ပွင့်အစွန်အဖျားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ငါ့မယားစကားပြားချပ်ချပ်? အပူချိန်အလွန်နိမ့်နေလျှင်သင်ဖုတ်နိုင်သည်။ 350ºFမှာမုန့်ဖုတ်သည့်မယားစကားကောင်းတဲ့နှင့် fluffy စေသည်နှင့်ထားရဲ့အမိုးခုံးပါပဲ။ အပူချိန်အလွန်နိမ့်နေလျှင်မုန့်ဖုတ်ခြင်းသည်သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုပြားစေသည်။ သင့်ရဲ့မီးဖိုအပူချိန်ကဘာလဲသေချာမသိ? သင်သည်သင်၏မီးဖို၏အပူချိန်ကိုချိန်ညှိရန်မီးဖိုသာမိုမီတာရနိုင်သည်။
သင်ဘယ်လို fluffy vanilla cupcake စာရွက်လုပ်သလဲ? fluffy မယားစကားပြောခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်မြင့်မားသောမြင့်တက်မှုနှင့်မီးဖိုအပူချိန်မြင့်မားစွာရရှိနိုင်စေရန်အတွက်မီးဖိုချောင်မှအမှုန့်များလုံလောက်စွာရရှိနိုင်ပြီးဓာတ်လှေကားအမြောက်အများကိုဖန်တီးနိုင်စေသည်။ သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်များတွင်အရည်များလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်သင်၏အတွင်းခံများကသူတို့ကိုပြိုကျစေနိုင်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မုန့်ဖုတ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့်ရဲ့မယားကန့်လန့်ကာတွေဘာကြောင့်ဆွဲထုတ်နေတာလဲ။ သင့်စာရွက်တွင်အရည်များလွန်းခြင်း၊ ရေနံများပြားခြင်း၊ အမဲဆီ - အထောက်အထား ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုတံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာတစ်ခုတွင်သိုလှောင်ထားပြီးအစိုဓာတ်ကသူတို့ကိုဆွဲထုတ်သွားပါကသင်၏အတွင်းခံများဆွဲထုတ်နိုင်သည်။
ဒီ vanilla cupcake စာရွက်ကိုအရသာထပ်ထည့်နိုင်မလား။ ဒီမက္ကဆီရဲ့အရသာကို vanilla ကနေသံပုရာ (သို့) အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ဖျန်းခြင်း၊ ကြေမွ Oreos (သို့) သစ်သီးများကဲ့သို့သောခြောက်သွေ့သောမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုသင်ချက်နည်းမပြောင်းဘဲထည့်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ငါ့မယားစကားစေးကပ်နေကြသနည်း အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုပလပ်စတစ်အဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါကသို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုလုံးဝအအေးမခံမီ၎င်းတို့ကိုထည့်စရာပုံးတစ်ခုထဲသို့ထည့်ပါကငွေ့ရည်သည်မက္ကဆီထိပ်ပေါ်မှစုဆောင်း။ နွေးသွားလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ငါ့မယားစကားကျုံ့သလဲ မက္ကဆီကိုသည်သင်၏ဘက်ထရီကိုအလွန်အကျွံမွှေနှောက်ခြင်း၊ အလွန်အကျွံဖုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်စာရွက်ထဲတွင်အဆီ / အရည်များလွန်းခြင်းတို့မှလွတ်သွားနိုင်သည်
ကိတ်မုန့်တွေကိုအေးခဲအောင်လုပ်လို့ရမလား။ မဂ္ဂဇင်းများကို ziplock အိတ်များတွင် ၆ လအထိအေးခဲနိုင်သည်။
ချောကလက် Buttercream Frosting
ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ vanilla မက္ကိတ်မုန့်ဟာသူတို့ရဲ့အရသာနဲ့ကတ္တီပါကတောက်ပမှုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ မည်သည့်အထူးအခါသမယအတွက်မဆိုအလွန်စိုစွတ်သော fluffy မယားစကား။ ဒီစာရွက်ကို vanilla နှင်းခဲများနှင့်အတူအကြောင်းကို 24 မယားစကားစေသည်။ ပြင်ဆင်ချိန် -၁၀ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၁၆ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၂၆ မိနစ် ကယ်လိုရီ၂၀၉kcal
▢၁၀ oz (၂၈၄ ဆ) မုန့်ညက်မုန့်ညက်
▢၉ oz (၂၅၅ ဆ) သကြားဓာတ်
▢1/4 Tsp (1/4 Tsp) မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ
▢နှစ် ကြီးမားသည် (နှစ် ကြီးမားသည်) ဥ အခန်းအပူချိန်
▢၄ oz (၁၁၄ ဆ) ဟင်းရွက်ဆီ
▢၅ oz (၁၄၂ ဆ) နို့ အခန်းအပူချိန်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်နွေး
▢၄ oz (၁၁၄ ဆ) ထောပတ် unsalted နှင့်ပျော့ပျောင်း
▢နှစ် Tsp (နှစ် Tsp) vanilla
▢၂၄ အောင်စ (680 ဆ) သကြားမှုန့်
▢၆ အောင်စ (၁၇၀ ဆ) Pasteurized ကြက်ဥလူဖြူ
▢၁ သေးငယ်သော ခရမ်းရောင်အစားအစာအရောင် drop (အဖြူရောင်နှင်းခဲအတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်)
မှတ်ချက် - အထက်ဖော်ပြပါအခန်းအပူချိန်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အခန်းအပူချိန်နှင့်အလေးချိန်အားဖြင့်တိုင်းတာထားသောကြောင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများမှန်ကန်စွာရောစပ်။ ပေါင်းစပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ 350º F မှမီးဖိုအပူ
အဆိုပါထောပတ်နှင့် vanilla ပေါင်းစပ်နှင့်ဘေးဖယ်ထား
ဆီနှင့်ကြက်ဥများကိုပေါင်းစပ်ပါ။ ကြက်ဥတက်ချိုးရန် whisk ။ ဘေးဖယ်ထားပါ။
မုန့်ညက်၊ သကြား၊ မုန့်ဖုတ်အမှုန့်၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်ဆား၊ ထောပတ်တို့ကိုရောနှောထားသောရောနှောထားသောအိုးတွင်လှော်ချိတ်တွဲပါရှိသည်။ အရောအနှောကြမ်းသဲနှင့်တူသည်အထိပေါင်းစပ်နိမ့်အပေါ်ရောမွှေပါ။
သင်၏နို့ရည်ကိုထည့်ပြီးခြောက်သွေ့သောအာဟာရများစိုစွတ်အောင်မွှေပါ။ ထို့နောက် medc အထိတိုးမြှင့်ပါ (၄ င်းကိုကျွန်ုပ်၏ KitchenAid တွင်ချိန်ညှိပါ) နှင့်မက္ကကေး၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ၁/၂ မိနစ်မျှရောနှောပါစေ။ သင်ဤအဆင့်တွင်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုရောမွှေပါကသင်၏ကိတ်မုန့်ပြိုကျနိုင်သည်။
နှစ်ဖက်စလုံးကိုနောက်တဖန်ခြစ်ပြီးအရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းထားခြင်းကိုမွှေထားသောပြင်ဆင်ထားသောမက္ကဆီကန် 2/3 အပြည့်သို့မဟုတ်မက္ကကိတ်လျှင် ၁.၅oz ဘက္ထရီထဲထည့်ပါ။ ၁၆-၂၀ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပါ။ အနားစွန်းများသည်အညိုရောင်ဖြစ်လာသည်နှင့်သင်ထိသောအခါဗဟိုသည်ပြန်ထွက်လာသည်အထိမုန့်ဖုတ်ပါ။ မုန့်ဖုတ်မှတဆင့်ဒယ်အိုးတစ်ဝက်လှည့်။
သင်၏ရပ်တည်ချက်ရောနှောထားသောပန်းကန်လုံးတွင် ၀ ှက်ထားသည့်ပူးတွဲပါရှိခြင်း၊ ကြက်ဥလူဖြူများနှင့်သကြားအမှုန့်များကို ၁ မိနစ်ခန့်အမြင့်တွင်သုတ်သင်ပါ။
အနိမ့်သို့မြန်နှုန်းလျှော့ချပြီးသင့် vanilla, ဆားနှင့်ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်ထည့်ပါ။
အရှိန်မြှင့ ်၍ အမြန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့ ်၍ အလင်းရောင်၊ အဖြူရောင်နှင့်မွှေးနေသည့်အထိနှင်းခဲပွင့်များကိုကျစေပါ။ ၎င်းသည်အရသာရှိပါက buttery ကိုမြည်းစမ်းပါကဆက်ပြီးရောစပ်ပါ။ ဒီဟာက ၁၀-၁၅ မိနစ်။ ဆက်ပြီးရောနေမယ်။
optional ကိုခရမ်းရောင်အစားအစာအရောင်အတွက်ထည့်ပါ။ paddle attachment သို့ပြောင်းပြီးလေပူဖောင်းများကိုဖယ်ရှားပြီးသင်၏ buttercream ကိုချောမွေ့စေရန် ၁၅ မိနစ်ခန့်ရောနှောပါ။
အကောင်းဆုံးမြင့်တက်ရန်အတွက်သင်၏နံပါတ်များကို ၂/၃ မွန်းတည့်ကိတ်မုန့်ဖြင့်တစ်ခွက်လျှင် ၁/၂ အောင်စဖြည့်ပါ
သင့်ရဲ့ Battery (နို့၊ ထောပတ်၊ ကြက်ဥ) တွေကိုမရောနှောခင်သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးဟာအခန်းအပူချိန်မှာသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင်၏မုန့်ဖုတ်ကောင်းများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အမိုးခုံးထားရန်မုန့်ဖုတ်ခြင်းမပြုမီသင်၏မီးဖိုကို ၃၅၀ ºFမှမိနစ် ၃၀ ကြာအောင်အပူပေးပါ။
မုန့်ဖုတ်မယားစကားသည် ၆ လအထိအေးခဲနိုင်သည်။